"Fa tsy misy olombelona tsy manota." 2 Tantara 6. 36
"Ary tahaka ny nanendrena ny olona ny ho faty indray mandeha, ary rehefa afaka izany, dia hisy fitsarana…" Hebreo 9. 27
"Minoa an’i Jesosy Tompo, dia hovonjena ianao." Asan’ny Apostoly 16. 31
Imbetsaka ny Baiboly no manambara fa ny olona rehetra dia samy nanao ratsy teo anatrehan’Andriamanitra : “Samy efa nivily izy rehetra ka tonga vetaveta avokoa” (Salamo 14:3). “Tsy misy hafa, fa samy efa nanota izy rehetra ka tsy manana ny voninahitra avy amin’Andriamanitra” (Romana 3:22, 23). Satria Andriamanitra tsy maintsy manafay ny ota, dia vokatra tsy azo ihodivirana ho an’ny tsirairay ny fanamelohan’Andriamanitra. Koa samy mila ny famelana ny fahadisoantsika avokoa isika, raha tsy izany dia tsy ho afa-mijoro eo anatrehan’Ilay Andriamanitra marina tanteraka. Tsy maintsy fafana sy foanana ny fahamelohantsika, mba tsy hahavoasazy antsika. Ny fahafatesan’i Jesosy Kristy, Ilay Zanak’Andriamanitra, tonga tetỳ an-tany toy ny olona, no mahavita izany tanteraka. Ny fahafatesany no hany fomba hanonerana ny fahotana, hany fomba mahavaly ireo fitakiana ara-drariny ataon’Andriamanitra. Araka izany, mba hahavoavonjy ny tsirairay, dia ny finoany manokana no tsy maintsy anekeny an’i Jesosy Kristy ho Mpamonjiny.
Raha mbola tsy nanaiky Azy ianao, dia mbola tsy tara izao.
Ho amin’izany, aoka ianao tsy hangataka andro :
— Ampahatsiahivo ny anaran’ny Tompo, rehefa mivavaka an’Andriamanitra ka miresaka aminy toy ny miresaka amina Olona maniry sy afaka mamela heloka anao.
— Ambarao aminy an-kahitsiana ny fahotanao, satria fantatrao fa mendrika ny fanamelohany ianao.
— Minoa fa mba hanonerana izany fahotanao izany, dia niaritra teo amin’ny hazofijaliana ny famaizana sahaza izany Jesosy Kristy, ka miorina amin’izany fitiavana tsy manam-pahataperana izany, ny fanoloran’Andriamanitra anao famelan-keloka sy fandraisany anao ho zanany.